Xiriirka ka dhexeeya khadka Masiix, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Xiriirka: tusaalaha Masiixa
Waxaan u dhintay sharciga inaan sharciga noolaado. Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa. Waan noolahay, laakiin imika ma ihi, laakiin Masiix ayaa igu dhex jira. Maxaa yeelay, waxaan haatan jidhka ku noolahay, waxaan ku noolahay aamin xagga Wiilka Ilaah, kan i jeclaaday oo naftiisa isu bixiyey (Galatiya 2,19: 20).
Dhibaatooyin xagga ruuxiga ah ayaa ka jiray bulshada Korintos. Waxay ahayd kaniisad hadiyado leh, laakiin fahamkeeda ku aaddan injiilka ayaa la dhaawacay. Sida iska cad waxa jiray "dhiig xun" oo udhaxeeyey Korintos iyo Bawlos. Qaar baa su’aal ka keenay rasuulka rasuulkiisa iyo amarkiisa. Waxaa kale oo jiray in wax laga beddelo walaalaha ka tirsan fasalada bulshada ee kaladuwan. Qaabka ay "xusaan" Cashada Rabbiga ayaa ahayd mid gaar ah. Taajiriinta ayaa la siiyay daaweyn doorbid ah, halka kuwa kalena laga reebay ka qeybqaadashada. Shuraako wadaagis ayaa lagu dhaqmay oo aan raacin tusaalaha Ciise isla markaana ku xadgudbay ruuxii injiilka.
In kasta oo ciise masiixu runtii udub dhaxaadka u yahay dabaaldegga cashada Rabbiga, ma iska indhatiri karno muhiimadda uu Ilaah u leeyahay midnimada jirka rumaystayaasha. Haddii aan ka mid nahay Ciise, waa inaan sidoo kale isku mid nahay. Markuu Bawlos ka hadlay aqoonsiga dhabta ah ee jidhka Rabbi (1 Korintos 11,29), isaguna maskaxda ayuu ku haystay tan. Baybalku wuxuu ka hadlayaa xiriirka. Ogaanshaha Sayidku maahan jimicsi aqooneed oo keliya. Jidkeennii maalinlaha ahaa ee Masiixiyiintu waa inay noqdaan kuwo daacad ah, xoog leh, oo dhab ah. Waxaan had iyo jeer isku hallayn karnaa ciise. Muhiim ayaan u nahay isaga. Qosolkeenna, walaaceenna, isagu wuu wada arkaa. Marka jacaylka Ilaah taabto nolosheena oo aan dhadhamino nimcadiisa jannada ku jirta ee aan la sheegi karin, fikirkayaga iyo ficilkeenna ayaa is beddeli kara. Waxaan rabnaa inaan noqono dad quduus ah oo Badbaadiyeheenu maleeyay. Haa, waxaan la dhibtooneynaa dembiyadayada khaaska ah. Laakiin Masiixa ayaa inagu yidhi xaqnimo. Midnimadeenna iyo ka-qaybgalkiisa isaga ayaa lagu heshiiyaa Ilaah. Dhexdeeda dhexdeeda waa la inagu daahirin jiray oo xaq laga dhigay, oo caqligiina Ilaah ayaa naga fogeeyey. Haddii aan ku dembaabno jidhka ka dib, Ilaah had iyo goor diyaar ayuu u yahay inuu cafiyo. Maaddaama aan la heshiinay Abuureheenna, waxaan sidoo kale dooneynaa in aan iskula heshiinno.
Qaarkeen baa laga yaabaa inay la macaamilaan farqiga u dhexeeya lammaanaha, carruurta, ehelka, asxaabta ama deriska. Mararka qaarkood tani waa tallaabo adag. Kibirka madax xoogani jidkeenna wuu xannibi karaa. Waxay u baahan tahay is-hoosaysiin. Ciise wuxuu jecel yahay inuu arko dadkiisa oo u halgamaya wada-noolaanshaha mar alla markii ay suuragal tahay. Markuu Ciise Masiix soo noqdo - dhacdo ka hadashay karaamadan - waxaan la mid noqon doonnaa isaga. Waxba nagama sooci doono jacaylkiisa waxaanan ku badbaadi doonnaa daryeelkiisa weligiis. Waxaan rabnaa inaan gaarno kuwa ku dhaawacmay adduunkan oo aan sameynno qaybteena si aan uga dhigno Boqortooyada Ilaahay mid ka muuqata dhammaan qaybaha nolosha maanta. Ilaahow ha inagu jiro, inagula jiro iyo annaga.
waxaa qoray Santiago Lange